Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : nyvelomaizaynapetrany
Entrée Ny veloma izay napetrany
Auteur Ratsimbazafy Gilbert, 1958
Editions Pages: 201.
Rakotomalala rain'i Lisy, hoy izy nanomboka, dia isan'ny lehilahy azo atao hoe manana. Mpampanao sy mpivarotra biriky tanimanga no raharahany, dia manao sy mivarotra trano vita koa. Lehilahy sady mahira-tsaina izy no tsara fanahy ka tsy mba sahirana mandrakariva tamin'ny raharahany. Be olom-pantatra koa izy ka maro mpividy ny varony ary mandroso tsy mijanona ny raharahany, araka izao hitan'ise amin'ny fandrosoan'ny fanaovan-trano sy fitaran'ny tanànan'Antananarivo izao. Kamiao ny azy no mpitatitra ny biriky sy ampiasainy koa amin'ny fanaovan-trano, ka satrin'ny io olona ihany aminy no mividy biriky fa tateriny hatreny amin'izay ampiasana azy izy ireny. Dimy ny tranon-dry zareo no tsy mba namidiny mihitsy fa notazoniny nahofany, ka ireo no noheverin' Ingahy Rakotomalala hitsinjovany ny vody androho meriky ny fahanterany; anankiray amin'ireny ilay ipetrahan-dry zareo ka nidirantsika sy ise omaly iny. Tsy mba mandala vola aman-karena izy amin'ny fianaran'ireo zanany, nefa koa, na miboika tsy ritra toy ny loharano ambody tendrombohitra aza ny volany, dia tsy mba nentiny nizahozaho na oviana na oviana izany; fady azy mianakavy ny misehoseho foana. Tsy mbola fantatr'ise angamba fa manana aotomobilina fitondra mitsangantsangana koa rizareo, nefa ireo zanany dia samy dia an-tongotra no andehanany mianatra, na lavitra na akaiky no misy ilay sekoly. Sady fahasalamana ho an'ny zanany, hono, ny dia an-tongotra no tsy mahatonga azy ireo hiaingitraingi-poana. Izany tsy milaza fa kahihitra ny lehilahy. Hitan'ise araka ireny tokantranony ireny fa izay rehetra mety hampiadana ao an-tokantrano dia ananany avokoa.
Ny antony itantarako lava amin'ise ny amin'lngahy Rakotomalala dia noho izao antony izao: i dada no noheveriko ho lehilahy hany azoko noderaina tamin'ny fiainany tamin'ny lehilahy rehetra efa hitako toe-piaina, fa Rangahy ity dia tsy latsaka noho izy, na manan-tombo kely aza noho ny fianarana hitany bebe kokoa.
- Hafa be ise izany, hoy aho; ny midera vady tsy miherin-taona aza, hono, tsy fanao, ka ise kosa mbola fofom-binanto dia midera rafozana sahady.
- Rehefa	mahita	ka	mahalala	azy tanteraka ise, ary mahatsapa ny toe-tsainy raha miresaka aminy fotoana maharitraritra, dia mbola ise io indrindra no angamba ho be filaza
Toy izao i Monique indray mijery tamiko: zazavavy tsara tarehy sy bikana izy, hita matanjaka sy tsara toe-pahasalamana, nefa dia izay ihany; tsy nisy zavatra azo nantenaina taminy tankoatr' izay...
Ary raha ny momba ny lafiny tamin'ny fianakavian-dry Monique indray, dia toy izao: be fihetsehana ry zareo. Mpanara-damaody izy mianakavy sady mpividy masom-bahoaka. Raha be fidiram-bola indray moa ka na hanao izany aza dia mbola atao hoe entanin' ny volabeny angaha, fa raha olona minia misahirana kosa noho ny fidiram-bola tsy ampiampy no manao izany, dia vao mainka meloka indroa no fiheverako azy. Mpiasam-panjakana Randrianasy rainy, nefa dia mboly kelikely ny karaman'izy ireny tamin'izany fotoana izany, na efa tamin'ny toerana ambonimbony ihany teo amin' ny samy Malagasy aza no nisy azy. Na kely am-pitenenana aza mantsy ny vola miditra kanefa mahay mitantana izany ny idirany, dia tsy mbola azo lazaina ho kely izy, fa raha miroborobo fitantana kosa ilay mpandray, dia tsaroana ny tena mahakely azy.
Tamin'izany fanenjehana fihetsiketsehana teo amin-dry zareo izany, dia nisy aza sahy nilaza fa ny sasany tamin'ireo fanaka tao an-tranony, hono, dia nohofany. Izay trano dia tsy nananany, fa trano nohofana koa no nipetrahany. Vavy tokana koa moa i Monique, koa dia nanaram-po ery teo amin'ny fitiavan'ireo ray aman-dreniny azy. Isan-javatra anankiray tsy nahazoazoako ity fianakaviana ity koa, dia ny fitiavana manao fanasana loatra. Nohararaotin'izy ireo daholo izay rehetra azo nahararaotina hanaovana an'ireny: fisondrotan-kilasin'lngahy Randrianasy, fitsingerenan'ny nahaterahana, fetin'i Monique. Ny dihin'ny tanora nasaina no nahaloaka alina ireny fivoriana ireny hatrany. I Monique dia araka ilay fiteny hafahafa fanaon'ireo tanora atriatry raha ny momba izany: " poizina raha hikosoka". Izaho kosa anefa, rehefa nanao karazan-dihy roa na telo, dia nataoko ho ampy ahy izany hoentiko mampiseho fahalalam-pomba fotsiny teo amin'izay tsy nahazoako niala ireny karazam-pivoriana ireny! Bebe ihany raha izany ny tsy fitovian-tsaina teo aminay, ary izany dia tsy ho antoka na oviana na ovian'ny fahasambarana eo an-tokantranonay ho avy. Ary na dia holeferiko lalandava daholo aza izany rehetra izany, tsy avy amin'ny fileferan'ny ankilany hatrany akory no haha-paradisa ny fiainan' olon-droa tsy mitovy fisainana!
Tovolahy roa samy hafa finoana
Rakotomavo dia katolika isan'ny natao hoe mazoto sy mpankato ny fitsipi-pinoany - toetra iray isan'ny niderako azy io, na dia matetika aza izahay roa lahy no mifamazivazy momba izany. Ny fianakaviako kosa indray dia protestanta; ary ireo razako no efa izany hatramin'ny nidiran'io antokom-pinoana io teto an-kibon' Imerina. Na dia tsy mba isan'ireo nafana sy vontom-pinoana aza aho, dia nijoro lalandava ihany ho isan'ny ondry amin'io vala io. Voatery tsy maintsy niangona isan'alahady aho raha mbola zaza ary namonjy sekoly alahady tsy tapaka. Fa nony lehibebe kosa aho, io nandray ny roapolo taona, dia toa nalaindaina niangona sy nanjary tsy mpiditra mihitsy aza fa tonga tamin'ilay andro sarotry ny fahatanorana: te-hiseho ho tsy mpinompino foana na vonto, sady ny loha tsy dia mbola mahalanjalanja loatra tamin'izany dia feno ny soratr'ireo mpilaza tena ho tsy miandevo saina sy ny an'ireo tsy mpino afa-tsy ny mety hotsaroan'ny faritra mpandray dimy teo amin'ny tenan'ny olombelona.
Niova indray anefa izany fangatsiahatsiahana izany rehefa nitranga ilay " fitiavam-pahatanterahana " tsy milefitra, ka tonga fahasorenana tamin'ny fahitana ireo mpiangona alahady fa mpangalatra akoho alatsinainy, na ireo midera amin'ny vavany fa misakelika ihany kibay; tamin'izany raha mba niady hevitra tamin'izy ireny, dia izao no valiny azo: " Tsy mila ny marina, fa ny mpanota hibebaka ". Asa izay fandraisan'izy ireny izany teny izany; ary toa io aza no andalan-teny mahavantana azy ireo indrindra amin'ireo hevi-dalina betsaka raketin'ilay Boky. Rehefa nitombo anefa ny taonako ary be koa ny voadiniko, dia tsinjoko fa tsara tamiko izany fomba nitaizana ny andron'ny fahazazako izany; ary na tsy tonga isan'ireo mafana na oviana na oviana aza aho, dia mbola miaiky fa vokatry ny fitaizana mbola kely teo amin'ny Soratra Masina raha toa aho tonga olom-banona ankehitriny.
Toa dia lava taria sy be resaka aho ny momba ireo ambony ireo, nefa ilaina ihany izany hitsarana ny fihetsikay roa lahy eo amin' ny tantara izay manaraka. Mbola antitranteriko ihany aza fa Rakotomavo izay mpivavaka mafana hatramin'ny fony kely ka ambara-pahalehibeny dia tsy mba sahy nanao vazivazy mihitsy ny zava-mikasika ny fivavahana. Ary izaho, na dia nanao somonga taminy aza, dia tsy sahy nitsofoka lavitra tany amin'izay mety handratra ny fony. Samy tia vaky boky lozantany izahay roa lahy, ka matetika izahay no nifampindram-boky. Voafitako izy indraindray hamaky boky izay tsy azon'ny Katolika vakina... Tamin'izany andron'ny fahatanorana be kiniania izany, dia toy ny vazivazy ihany no nanaovana izany, ary nahatsipatsipaky ny hehy ery ny nahita ny endri-dRakotomavo rehefa nilazana ny marina momba ilay boky vao avy novakiny. Nony amin'izao andron'ny fahalehibeazana izao anefa. dia tsaroana ho toy ny hadaladalana tafahoatra ihany izany, ary tsy hafa fa fanapitsohana ny vatan'ny fieritreretan'olona ka zava-tsy mendrika.
Rehefa vita ny " valo androny " , dia indro izy nibaby ny kotrany nitodi-doha namonjy an'i Fiadanana, fa izaho kosa dia toy ny ankizy nilaozan-tsakaiza, nitango resaka irery. Saiky tsy nety nahazatra ahy izany hoe tsy niaraka tamin-dRakotomavo. Ny maraina teny am-panaovana garasisa, toa mbola hoatra ny tazako izy ery alohanay rehetra - natanjaka tokoa izy fa sady lava no vaventy - misava lalana, amin'ny hazakazaka fanaonay isa-maraina mandritra ny adim-pamantaranandro iray na mahery, samy mitondra ny forongo tsy misaraka, toy ny basy, bazanety, ets... Henika anay tamin''o izany hazakazaka izany ny tampon-tanety, tevana, valamparihy, tampon-tamboho ampiantany sy trano rava manodidina an'Andriasoro sy Tsarahonenana, Ampandrianomby sy ny ambany atsinanan' Andrianarivo; endrey izany izahay miakatra sy midina amin'ilay sinibendrano eo ambony atsinanan' Ambatofotsikely ka ny fantsona' ihany no orahina na amin'ny miakatra na amin'ny midina! Rehefa anjarako no mitondra ny F.M. - izay mavesatra ihany amin'izany dia an-kazakazaka rehetra izany - dia ny basiny no natolony ahy fa raisiny kosa ilay F.M. nony tsinjony fa manomboka miletaleta sy mivoa-dinitra aho. Ny antoandro, toa mbola tsinjoko izy, rahefa manao sarinady, " mitifitra " ny paiso sy paoman'Andraisoro, ka manipy ho anay namany. Mety ho voasazy mafy izay tratra amin' izany! Aorian'ny rapaoro, toa mbola hitako izy " mandrava " amim-pahakingana ny antontan-tsaramaso tanora na ovimbazaha hovoasanay, ka mandrakariva dia ny anjarany no vita aloha indrindra. Eo am-pisakafoana indray, dia tsaroako ihany koa izy, fa izy no mpisotro ny anjara divaiko: na dia tsy isan'ny mpikambana amin'ny mpifady zava-pisotro mahamamo aza mantsy aho dia tsy nanendry toaka na divay. Ny takariva amin'ny " étude " , dia toa mbola reko izy manangana resaka manokana iadian-kevitra momba ny zavatra maro izay tsy tao anatin'ny nianaranay tamin'izany akory, toy ny fivavahana izany, filozofia sy dingan-davan'ny fandrosoan'ny fahaizan' olombelona tamin'ny lafiny samihafa. Ny politika ihany no tsy mba firesany loatra. Noboriboriany ho toy izao ny filazany ny mpanao politika: ireo nataony hoe adalaben'Andriamanitra na mpanara-drian-drano; ireo fetsilahy mpanararaotra ny fahorian'ny sasany hoenti-manakorontana ny filaminana mba hisamboran'izy ireny ny toerana misy lakile; ireo mpitsentsi-dra, manao ny politika ho tetezana hitana eny anivon'ny harena sy ny voninahitra; ary, farany, ireo olom-bitsy feno idealy, mety ho martioran'ny heviny, nefa mandrakariva ratsy fiafara, fa sady tsy mety hifandray tendro amin'iretsy karazana etsy ambony no ihodinan'ny sarambabem-bahoaka koa, izay tsy mena-mivadika toa andro ririnina fa mandeha amin'izay hitsofan'ny rivotra azy toy ny akofa eny am-pamoloana.